Ireo fahagagana nataon’i Jesosy
“Jesosy avy any Nazareta [dia] nohosoran’Andriamanitra tamin’ny Fanahy Masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon’ny herin’ny devoly.” Asan’ny Apostoly 10:37,38
Tsy nisy, na iray aza, mpiara-belona tamin’i Jesosy ka tsy liana tamin’ireo fahagagana nataony. Ho an’ny sasany dia miharihary fa fanehoana ny herin’Andriamanitra ireny, ho an’ny hafa dia fanakianana ny fombam-pivavahana nahazatra azy ireo; ary farany, ho an’ny ankamaroany, dia zava-mahaliana sy maha very hevitra.
Ahoana tokoa moa no tsy hiraika, manoloana ny nananganana an’i Lazarosy tamin’ny maty, manoloana ny nanasitranana tamin’ny fomba mahagaga ireo marenina, na jamba, na boka? Ahoana no tsy hitolagaga, manoloana ny nanafahana ireo olona azon’ny fanahy maloto, na manoloana ny fitsimbinan’i Jesosy ireo zaza narary, izay naveriny tamin’ny ray aman-dreniny rehefa avy nositraniny? Ahoana no tsy ho tohina, manoloana ny fangorahany ireo vahoaka mahantra sy noana, izay novokisany, rehefa nampitomboiny tamin’ny fomba mahagaga ny mofo vitsivitsy nentina teo aminy?
Ahoana no itanisana ireo tanàna rehetra talanjona noho ny fahagagana vitan’ny heriny sy ny fitiavany? Ireo tendrombohitra rehetra, ireo moron-drano sy ireo synagoga izay nanasitranany ny marary, nanovàny ny alahelo ho fifaliana, ary ny fahafatesana ho fitsanganana amin’ny maty?
Fa ny fahagagana lehibe indrindra, tsy ny tantarany ve? Jesosy, na dia Andriamanitra aza, dia nanjary olombelona teto amin’izao tontolo izao, nizaka izay rehetra vokatr’io fietrena io, anisan’izany ny nahafatesany teo amin’ny hazofijaliana, sy ny nitsanganany tamin’ny maty.
Velona Izy ankehitriny, na tsy hita maso aza; fantany sady tiany manokana isika tsirairay. Aoka hanaiky hihaona aminy, mba hahazoany manatanteraka fahagagana vaovao iray… dia ny famonjena ny fanahintsika.